Ukuhlolwa kokuqala Windows 10X Ukubuka kuqala kwi-MacBook | Ngivela kwa-mac
Okokuqala Windows 10X Ukuhlola kuqala ku-MacBook
Ububanzi beWindows benza kube lula ukufaka kwi-Mac. Ngeke singene empini yokuthi ingcono noma yimbi kuneMacOS. Wonke umuntu unalokho akuthandayo nalokho akuthandayo. Inzuzo abasebenzisi beMac abanayo ukuthi singakwazi ukufaka zombili izinhlelo zokusebenza emishinini yethu. Ukubuyela emuva kungenzeka, ngokuhlelwa okuthile okucacile, kepha kube nzima kakhulu.
IWindows isebenza cishe kuwo wonke amakhompyutha akhona. Inabashayeli cishe bazo zonke izingxenye zekhompyutha. Uma sengeza kulokhu ukuthi ama-processor nama-chipsets akha iMac awanakho okhethekile nge-Apple (Intel CPUs, Intel GPUs kanye neNvidia) sikuqinisekisile ukuhambisana. IMicrosoft isivele ikhiphe Windows 10X Preview futhi isivele ihlolwa kuma-Macs. Futhi kubonakala sengathi iyamanzi kakhulu.
IMicrosoft icishe yalungela inguqulo yayo entsha ye-Windows ethembisa ukuthi izoshesha, ithembeke futhi iphephe kakhulu. I-Windows 10X iyatholakala kunguqulo yayo yokubuka kuqala futhi isivele ihlolwe kwi-MacBook. Alukho usuku lokukhishwa lwenguqulo yokugcina ye-Windows 10X okwamanje. Esikwaziyo ukuthi kuzosebenza kahle kwi-Mac yakho.
- Sunshine Biscuit esikalini (@imbushuo) February 13, 2020
Ukubuka kuqala kweWindows 10X ku-MacBook
Uma une-Mac yamanje eneprosesa ye-Intel, manje usungadala ukwahlukanisa kweWindows ngeBoot Camp. Ukusuka lapho, ukufaka Windows 10X Ukubuka kuqala kungumoya. Izindaba ezimnandi ukuthi ngenkathi kusenguhlobo yesilingo, isebenza kahle kwi-MacBook.
Unjiniyela @imbushuo ufake le nguqulo yokuqala ye Windows 10X Ukubuka kuqala namazwana akwi-akhawunti yakhe Twitter imiphumela yalolo vivinyo. Uthi ukufakwa kube lula kakhulu nokuthi kusebenza ngokushelela kakhulu. Kubonisa nokuthi kunezimbungulu ezithile ohlelweni, okuthile okujwayelekile kulezi zinguqulo zokuqala zokuhlola.
Phawula lokho Iningi labashayeli obelidinga lifakiwe kwi-firmware, kufaka phakathi leyo esekela amachweba we-MacBook's Thunderbolt kanye ne-touchpad. Impela kubasebenzisi abafuna ukuba nayo Windows 10X kwi-Mac yabo, lezi izindaba ezinhle. Uma uthanda ukucwilisa, ungaqala manje. @imbushuo usewuqalile umgwaqo ...
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » I-Mac OS X » I-boot camp » Okokuqala Windows 10X Ukuhlola kuqala ku-MacBook
I-America encane ku-Apple TV +. Ukuthula kungaphezu kwamagama
ITomb Raider ngentengo uhhafu weMac